(trg)="2"> Le magazini ayithengiswa .
(trg)="3"> Ukupapashwa kwayo kuyinxalenye yomsebenzi wokufundisa iBhayibhile owenziwa ehlabathini lonke noxhaswa ngeminikelo yokuzithandela .
(trg)="4"> Ukuba ufuna ukunikela , yiya ku - www.jw.org / xh .
(trg)="5"> Ngaphandle kokuba kuboniswe ngenye indlela , iZibhalo ezicatshulweyo kule magazini zithathwe kwiNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele .
(trg)="6"> LE MAGAZINI , iMboniselo , izukisa uYehova uThixo , uMlawuli wayo yonke indalo .
(trg)="7"> Ithuthuzela abantu ngeendaba ezilungileyo zokuba kungekudala uBukumkani bukaThixo obusezulwini buza kuphelisa bonke ubungendawo buze benze lo mhlaba ube yiparadesi .
(trg)="8"> Ifundisa abantu ukuze babe nokholo kuYesu Kristu , owafayo ukuze bafumane ubomi obungunaphakade , ngoku onguKumkani woBukumkani bukaThixo .
(trg)="9"> Le magazini ipapashwe ukususela ngowe - 1879 yaye ayipolitiki .
(trg)="10"> Ithetha izinto eziseBhayibhileni .
(trg)="2"> 3 Kutheni Kufuneka Ufunde IBhayibhile ?
(trg)="3"> 4 Ndinokwenza Njani Ukuze Ndiqalise ?
(trg)="4"> 5 Yintoni Enokwenza Ube Nomdla Wokuyifunda ?
(trg)="5"> 6 IBhayibhile Inokubuphucula Njani Ubomi Bam ?
(trg)="6"> 8 IBHAYIBHILE IYABUTSHINTSHA UBOMI BABANTU
(trg)="7"> Ndandingafuni Ukufa !
(trg)="8"> 10 XELISA UKHOLO LWABO | UENOKI
(trg)="9"> “ Wayemkholisa UThixo ”
(trg)="10"> 14 NGABA KUKUNGAQONDI NJE ?
(trg)="11"> 16 ITHINI IBHAYIBHILE ?
(trg)="1"> Ngaba iBhayibhile iphelelwe lixesha ?
(trg)="2"> Okanye ngaba isabalulekile ?
(trg)="3"> Yona ngokwayo ithi : “ Sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo kwaye siyingenelo . ” ​ — 2 Timoti 3 : 16 , 17 .
(trg)="4"> Le Mboniselo inemizekelo yobulumko obufumaneka eBhayibhileni namacebiso endlela enokukunceda ngayo xa uyifunda .
(trg)="1"> INQAKU ELINGUMXHOLO | UNOKUFUMANA OKUNINZI XA UFUNDA IBHAYIBHILE
(trg)="2"> “ Ndandicinga ukuba kuza kuba nzima ukuyiqonda into ethethwa yiBhayibhile . ” ​ — UJovy
(trg)="3"> “ Ndandicinga ukuba iyadika . ” ​ — UQueennie
(trg)="4"> “ Xa ndandibona indlela iBhayibhile enkulu ngayo , ndaphelelwa ngumdla wokuyifunda . ” ​ — UEzekiell
(trg)="5"> Wakha wacinga ukufunda iBhayibhile kodwa watyhafiswa zezi zinto sithethe ngazo ngasentla ?
(trg)="6"> Kwabaninzi kubonakala kunzima ukuyifunda .
(trg)="7"> Kodwa uza kuthini xa uxelelwa ukuba inokukunceda wonwabe uze waneliseke ebomini ?
(trg)="8"> Futhi uza kuthini xa ufumanisa ukuba kukho iindlela ezinokukwenza ube nomdla wokuyifunda ?
(trg)="9"> Awunamdla wokuva ukuba iBhayibhile inokukunceda njani ?
(trg)="10"> Khawuve ezi zinto zithethwa ngabantu abaqalise ukufunda iBhayibhile yaza yabanceda .
(trg)="11"> UEzekiel , osekuqaleni kwiminyaka yee - 20 uthi : “ Kwixa elidlulileyo , ndandifana nomntu oqhuba nje imoto engazazi nalapho aya khona .
(trg)="12"> Kodwa ndathi ndakufunda iBhayibhile , ubomi bam banentsingiselo .
(trg)="13"> Inamacebiso endinokuwasebenzisa kubomi bam bemihla ngemihla . ”
(trg)="14"> UFrieda , naye osekuqaleni kwiminyaka yee - 20 uthi : “ Ndandikhawuleza ukuba nomsindo .
(trg)="15"> Kodwa ukufunda iBhayibhile kwandinceda ndakwazi ukuwubamba .
(trg)="16"> Loo nto yabangela ukuba abantu bangandonqeni , kangangokuba ngoku ndineetshomi ezininzi . ”
(trg)="17"> UEunice , ibhinqa elikwiminyaka yee - 50 uthi xa ethetha ngeBhayibhile , “ Indinceda ndibe ngumntu obhetele , nditshintshe imikhwa engathandekiyo . ”
(trg)="18"> Njengabo bafundi nabanye abaninzi , nawe iBhayibhile inokukunceda wonwabe ebomini .
(trg)="19"> Ezinye izinto enokukunceda kuzo zezi : ( 1 ) ukwazi ukwenza izigqibo ezifanelekileyo , ( 2 ) uzenzele iitshomi zokwenene , ( 3 ) umelane nestres , futhi ( 4 ) okona kubaluleke ngaphezu kwazo zonke , ufunde inyaniso ngoThixo .
(trg)="20"> Icebiso eliseBhayibhileni livela kuThixo , ngoko alinakukukhupha ecaleni .
(trg)="21"> UThixo akasoze akulahlekise .
(trg)="23"> Ngawaphi amacebiso anokwenza ungacingi kaninzi ngaphambi kokuba uqalise ukuyifunda futhi ukuthande ?
(trg)="2"> Unokwenza ntoni ukuze ukonwabele ukufunda iBhayibhile ize ikuncede ?
(trg)="3"> Nanga amacebiso amahlanu aye anceda abantu abaninzi .
(trg)="4"> Yifunde kwindawo efanelekileyo .
(trg)="5"> Zama ukufumana indawo ezolileyo .
(trg)="6"> Ziphephe izinto eziphazamisayo ukuze ingqondo ibe kuloo nto uyifundayo .
(trg)="7"> Ukufunda kwindawo ekhanyayo nenomoya ohlaziyayo kunokukunceda uyive kakuhle into oyifundayo .
(trg)="8"> Ingqondo mayilungele ukufunda .
(trg)="9"> Ekubeni iBhayibhile ivela kuBawo wethu osezulwini , iya kukunceda kakhulu ukuba unengqondo efana neyomntwana ofuna ukufundiswa ngumzali omthandayo .
(trg)="10"> Ukuba unezinto ongazithandiyo ngeBhayibhile , khawuzame ukulibala ngazo ukuze ufundiswe nguThixo . ​ — INdumiso 25 : 4 .
(trg)="11"> Thandaza ngaphambi kokuba uyifunde .
(trg)="12"> IBhayibhile inezinto ezicingwa nguThixo , ngoko ayimangalisi into yokuba kufuneka sifumane uncedo ukuze siyiqonde .
(trg)="13"> UThixo uthembisa ukubanika “ umoya oyingcwele abo bamcelayo . ”
(trg)="14"> Umoya oyingcwele unokukunceda uqonde indlela acinga ngayo .
(trg)="15"> Ekuhambeni kwexesha , uya kukuvula ingqondo ukuze wazi “ kwanezinto ezinzulu zikaThixo . ” ​ — 1 Korinte 2 : 10 .
(trg)="16"> Fundel ’ ukwazi .
(trg)="17"> Sukufundela nje ukugqiba .
(trg)="18"> Cingisisa ngento oyifundayo .
(trg)="19"> Zibuze imibuzo efana nale : ‘ Ziziphi iimpawu endizibonayo kulo mntu ndifunda ngaye ?
(trg)="20"> Ndinokuyisebenzisa njani le nto ndiyifundayo ebomini bam ? ’
(trg)="21"> Yiba nento ofuna ikuncede kuyo .
(trg)="22"> Ukuze iBhayibhile ikuncede , zimisele ukufunda izinto eziza kubuphucula nyhani ubomi bakho .
(trg)="23"> Unokuyifundela ukuba ikuncede kwizinto ozifunayo ezifana nezi : ‘ Ndifuna ukufunda izinto ezininzi ngoThixo . ’
(trg)="24"> ‘ Ndifuna ukuba ngumntu , umyeni okanye umfazi obhetele . ’
(trg)="25"> Emva koko khetha iivesi eziza kukunceda kwezo zinto .
(trg)="27"> La macebiso mahlanu aza kukunceda ukwazi ukuqalisa ukufunda iBhayibhile .
(trg)="28"> Kodwa unokwenza njani ukuze ube nomdla ngakumbi wokufunda iBhayibhile ?
(trg)="29"> Inqaku elilandelayo liza kukucebisa .
(trg)="30"> Ukuba akuzazi iivesi zeBhayibhile ezinokukunceda kwezo zinto , amaNgqina KaYehova aya kukuvuyela ukukunceda .
(trg)="31"> Thath ’ ixesha lakho , sukuleqa
(trg)="32"> Ingqondo yakho yonke mayibe kuloo nto uyifundayo — yiba ngathi ulapho
(trg)="33"> Zama ukudibanisa iivesi nento ekuthethwa ngayo
(trg)="34"> Zibuze ukuba yintoni ophuma nayo kule nto uyifundayo
(trg)="2"> Iyadika ?
(trg)="3"> Okanye kumnandi ukuyifunda ?
(trg)="4"> Ukufunda iBhayibhile kuza kuba njani kuwe ?
(trg)="5"> Kuxhomekeka kwindlela oyifunda ngayo .
(trg)="7"> Khetha iBhayibhile yolwimi lwangoku nechanileyo .
(trg)="8"> Akunakuthanda ukufunda incwadi enamagama amaninzi anzima okanye angasasetyenziswayo .
(trg)="9"> Ngoko fumana iBhayibhile oza kuyiqonda lula ukuze ifikelele intliziyo .
(trg)="10"> Kodwa ke kwangaxeshanye , kufuneka ibe yeguqulelwe kakuhle , ngendlela echanileyo .
(trg)="12"> Sebenzisa iteknoloji yezi mini .
(trg)="13"> Namhlanje iBhayibhile iyafumaneka nakwizinto ze - elektroniki .
(trg)="14"> Ezinye iiBhayibhile unokuzifundela kwi - intanethi okanye uzikhuphelele kwikhompyutha , kwitablet okanye kwiselfowuni .
(trg)="15"> Ezinye iinguqulelo zinezixhobo ezibangela ukuba ukwazi ukukhangela ezinye iivesi ezithetha ngaloo nto okanye uthelekise nezinye iinguqulelo ezahlukahlukeneyo .
(trg)="16"> Ukuba uthanda ukumamela kunokufunda , unokuyifumana iBhayibhile erekhodiweyo kwezinye iilwimi .